Fabián Marcel Gaete सेकेन्ड मा लघु कला बनाउँछ | क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | कलाकारहरू
के तपाईंलाई लघु कला थाहा छ? धेरै विवरणको साथ, यो कलाकारले वास्तवमै एक विशेष कला बनाउँछ, फेबियन मार्सेल, बाल्यकाल देखि उनी थियो चित्रकला को लागी शौक। उसको सम्पूर्ण परिवारले यसको विभिन्न पक्षमा कलाको अभ्यास गरेको छ। Fabián यो परम्परा अनुसरण, कला र चित्रकला को लागी आफ्नो लगन जारी जब सम्म उहाँ एक दुर्घटना यो यति गम्भीर थियो कि यो थियो संवेदनशीलता वा गतिशीलता बिना एक बर्ष.
प्रदर्शन गरिसकेपछि पुनर्स्थापना एक बर्ष भन्दा बढीको लागि, हेर्न वा सर्न असमर्थ, उसले केन्द्रित गर्यो मनलाई तालिम दिनुहोस्। एकपटक निको भएपछि, उनले आफ्नो चित्रकलाको प्रेमलाई निरन्तरता दिए।
2 यसले एक फ्रेम बनाउन seconds० सेकेन्ड लिन सक्दछ
3 यस पिन्टोको विशेषताहरू
फेबियन मार्सेल चिली मा जन्म भएको थियो र उनी मलागामा सरे धेरै बर्ष पहिले। हाल छ शहरी कलाकार। रंग र बनाउनुहोस् तपाईंको तपाइँको औंलाहरु संग काम गर्दछ। तपाईं उसलाई पाउन सक्नुहुन्छ मलागाका सडकहरू, सामान्यतया दिउँसो एक मा स्थित छ क्याथेड्रलको कुना.
यसले एक फ्रेम बनाउन seconds० सेकेन्ड लिन सक्दछ
फोटोहरू लिन फ्याबियनको फुर्ति आश्चर्यजनक छ। को कार्यक्रम मा एन्थिल उसलाई आफ्नो उपहार देखाउन आमन्त्रित गरियो। खुल्ला क्रिस्टल प्रदर्शन गर्न सक्षम थियो, मात्र मा केहि सेकेन्ड, कला को काम शीर्षक "परिदृश्य छुने।" सबैभन्दा प्रभावशाली छ प्राकृतिकता जुन उसले पेन्ट गर्दछ। ऊ चित्रण गर्दा प्रत्येक ब्यंग्य व्याख्या गर्न सक्षम छ।
उनका सबै कलात्मक उपहारहरू मध्ये, उनले विशेषज्ञता दिएका छन् ल्याण्डस्केप पुन: निर्माण गर्नुहोस्: हिमाल, समुद्र, सूर्योदय।
यस पिन्टोको विशेषताहरू
आफ्नो औंलाहरु संग आफ्नो औंलाहरु संग चित्रित गर्नुहोस्। उसको हस्ताक्षर, जुन उनले आफ्ना सबै कार्यहरूमा समाहित गर्दछ, उडान चरा हो। को एक स्तर छ विस्तार अचम्मको, र म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं उनको कला को प्रक्रिया को लागी हेर्नुहोस्। एक चमत्कार!
यो कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि यो अचम्मको छ, र अनुसार इन्टरनेट मा समीक्षा, उसको चपलता र कला देखेर छक्क परेका पर्यटकहरू उसको बाहिर उभिए कम मूल्य। एक बेलायती पर्यटकका अनुसार उनले उनीहरूलाई शुल्क लगाए छ यूरो चित्रकला को लागी र दस यूरो द्वारा dos.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » Fabián Marcel Gaete को लघु कला खोज्नुहोस्
कलाका यी कार्यहरू कहाँ अनलाइन खरीद गर्न सकिन्छ? (यदि सम्भव छ भने)